DAAWO: Gudoomiyaha Aqalka Sare Somaaliya oo dhaliilay. – Kismaayo24 News Agency
by admin 2nd April 2019 085
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa Golaha Shacabka ku eedeeyey inay horaatagn yihiin in xal buuxa laga gaaro khilaafka labada Aqal ee sababtay in Golaha Aqalka sare ay xiriirka u jaraan Golaha Shacabka.
Waxa uu sheegay guddoomiye Cabdi Xaashi in uu dadaal badan ku bixiyey sidii ay u wadashaqeyn lahaayeen labada Aqal,isla markaana uu warqad u diray Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka iyo kana hadda ee Maxamed Mursal, hayeeshee aan qoraaladiisa wax jawaab ah laga bixin.
Waxaa uu intaasi ku daray hadalkiisa in Aqalka Sare uu diyaar u yahay in waxwalba oo dhaawici kara wadashaqeyn wadahadal lagu xaliyo, balse uu Golaha Shacabka ka waayey in uu la qaato arrintaas.
Xildhibaanada labada Aqal ayaa waxaa haatan ka dhaxeeya khilaaf, iyada oo Golaha Aqalka sare ay xiriirka wadashaqeyn ay u jareen Golaha Shacabka,waxaana xusid mudan in dhowr bil ka hor uu Madaxweyne Farmaajo sheegay in uu xalinaayo balse aysan suurtagelin.
Caruurtii Wariye Jamaal Khashoggi oo lasiiyey Guryo iyo..
Daawo: Dowladda federaalka oo caafimaad dibadda ah u qaaday askar xoogga dalka ka tirsan oo kusoo dhaawacantay…..
Dr Adam Husein Holal. Gudiga Jaamacada Galgaduud ee UK waxay mujiyeen karti iyo isku xirnaan
admin 14th June 2015 27th August 2015